Hal qof oo isaga oo nool weli ku dhexjira diyaaraddii ku burburtay Adan Cadde Airporta iyo shaqadii garoonka oo hakad la geliyay. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Hal qof oo isaga oo nool weli ku dhexjira diyaaraddii ku burburtay Adan Cadde Airporta iyo shaqadii garoonka oo hakad la geliyay.
Hal qof oo isaga oo nool weli ku dhexjira diyaaraddii ku burburtay Adan Cadde Airporta iyo shaqadii garoonka oo hakad la geliyay.
Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa faahfaahin ka bixisay shil diyaaradeed oo subaxnimadii saaka ka dhacay gegida Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Sii’hayaha wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullai Salaad Oomaar, ayaa faahfaahin ka bixiyey diyaarad xamuul ah oo saakay ku dhacday garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Diyaaradda oo laga leeyahay waddanka Kenya, ayaa lasheegay in xumuul ay usidday magaalada Beledweyne, hase ahaate waxa ay kasoo kala jeesatay dhexda; kadib markii uu duuliyuhu dareemay cillad ku timi diyaaradda.
Wasiirkiu, ayaa sheegay in afar qof oo shaqaale ah ay la socdeen diyaaradda, kuwaas oo seddax kamid ah laga soo badbaadiyey, halka midka kale uu weli ku dhex jiro , isagoo nool oo si caadi ah u hadlaya.
Wasiir Oomaar, ayaa xaqiijiyay in saddexda qof ee laga soo badbaadiyey diyaaradda ay ku yaallaan dhaawacyo fudud, isla markaana dadaal loogu jiro soo badbaadinta qof weli ku dhex jira diyaaradda oo bad-qaba.
Diyaaradan oo saakay ka kacday garoonka Aadan Cadde ayaa daqiiqado kadib ku soo laabatay, kadib markii ay ciladowday. Waxayna ku dhacday gidaarka hore garoonka, iyadoo burbur xoog leh uu ka soo gaaray qeybo kamid dhismaha garoonka.
Wararkii u dambeeyey ee aan ka heleyno garoonka Aadan Cadde .ayaa sheegaya in gabi ahaanba ay hakad gashay shaqadii garoonka, sida ay ku warrantay idaacadda maxalliga ah ee Kulmiye.
Diyaaraddan, ayaa noqonaysa middii labaad ee laga leeyahay dalka kenya oo ku burburta gudaha Soomaaliya, muddo kooban ka kahor, ayaa diyaarad gargaar sida oo laga leeyahay Kenya waxa ay ku gubatay garoon diyaaradaha ee magaalada Belebweyne.
Akhri magacyada 7 wasiir, oo loo magcaabay diyaarinta xilwareejinta raysal wasaaraha cusub.
Sucuudiga oo dalkiisa u diiday dadka ka soo jeeda 20 dal, yaa ka mid ah?